Chelsea Oo Qeyb Kasoo Noqotay Kooxaha Xiiseenaya Adeega Anthony Martial – Gool FM
Chelsea Oo Qeyb Kasoo Noqotay Kooxaha Xiiseenaya Adeega Anthony Martial
(Chelsea) 01 May 2018. Wargeyska Telegraph Sport ayaa shaaca ka qaaday in Chelsea ay xiiseyneyso adeega xidiga kooxda Manchester United Anthony Martial, ka dib markii uu noqday ciyaaryahanka ugu horeeyay ee ka tagi doono Red Devils xagaaga soo aadan.
Anthony Martial ayaa qeybtii hore ee xili ciyaareedkan sameeyay bandhig wanaagsan, balse tan iyo markii uu Old Trafford yimid Alexis Sanchez bishii January, waxaa yaraatay fursadiisa kooxda Red Devils.
Kooxda reer talyaani ee Juventus ayaa lagu tiriyaa inay tahay kooxda ugu cad cad ee dooneysa adeega Anthony Martial, waana meesha ku haboon uu xidiga u dhaqaaqi karo, balse kusoo biirista Chelsea loolanka loogu jiro heshiiska ciyaaryahanka ayaa suuragal ka dhigi kara inuu ku fikiro sii joogi taanka dalka England.
Blues ayaa isku dayeysa inay dalab 45 milyan ginni ay u dirto Anthony Martial inkastoo Manchester United ay ugu yaraan 50 milyan ginni ku dooneyso, balse Blues ayaa heysata xidig ay ku fikireyso Red Devils inay soo qaadato waana laacibka reer Brazil ee Willian, waxaana suuragal ah in heshiiska uu noqdo mid is dhaafsi ah.
Bayern Munich iyo Tottenham ayaa sidoo kale xiiseynaya saxiixa Martial, lakiin ilaa iyo haatan Juventus ayaa weli ah kooxda ugu cad cad ee la filayo inuu u ciyaari doono.
DAAWO: Taageerayaasha Real Madrid oo si wayn uga cabsiiyay caawa kooxda Bayern Munich